कपिलवस्तुमा कहाँ कहाँ भयाे सडक याेजना खारेज ? विवरण सहित |
गृह पृष्‍ठ कपिलबस्तु कपिलवस्तुमा कहाँ कहाँ भयाे सडक याेजना खारेज ? विवरण सहित
कपिलवस्तुमा कहाँ कहाँ भयाे सडक याेजना खारेज ? विवरण सहित
प्रकाशित मिति : २०७८ आश्विन ४ , सोमबार १४:४८
कपिलवस्तु । लुम्बिनी प्रदेशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक योजना खारेज भएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका १४ सय भन्दा बढी सडक आयोजना अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि २१९ सडक योजनाका लागि विनियोजन भएको ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कटौती भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले तय गरेका सडक आयोजना खारेज गरेपछि रुपन्देहीका मात्र ४९ वटा सडक खारेजीमा परेका छन्।
बाँकेका २९, दाङका ३४, प्युठानका १४, कपिलवस्तुका ३३, पाल्पाका २३, गुल्मीका ३६ र रुकुम पश्चिमको एउटा सडक योजना प्रतिस्थापन विधेयकमा परेको छैन।
सडक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने एक हजार ४१० वटा सडक पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। कपिलवस्तुमा कहाँ कहाँ भयाे सडक याेजना खारेज ? विवरण सहित : 1410 sadak
पछील्लो पोस्ट कपिलवस्तुमा कहाँकहाँ सडक याेजना भए खारेज ? हेर्नुस् विवरण सहित
अगिल्लो पोस्ट उपमहानगर प्रमुख सुवेदीमाथि पहिराे पिडितले गरे मुक्का प्रहार